Naqshadeynta sawirada ayaa mas'uul ka ah walxaha cajiibka ah ee filimada | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | dhowr
Waqtiga qaar hubaal Miyaad aragtay filim leh hal ama in ka badan oo jilayaal oo aan jilayaal ka ahayn, halkii ay ku samaysteen kombuyuutar, laakiin waxay u muuqdaan kuwo dhab ah. Jilayaashani waxay leeyihiin qaabab kala geddisan waana kuwo gaar ah maadaama xaqiiqda aysan jirin.
Haddana weligaa ma is weydiisay yaa ka dambeeya jilayaashaas?
1 Naqshadayaasha naqshadeynta iyo waxa adduunka khiyaaliga ahi qariyo
2 Naqshadeynta iyo farsamada
Naqshadayaasha naqshadeynta iyo waxa adduunka khiyaaliga ahi qariyo
In kasta oo ay run tahay in animators-ka ay mas'uul ka yihiin sameynta, haddana naqshadeeyayaasha qaabdhismeedka ayaa xoogaa la xiriira tan waana sababta oo ah naqshadeeyayaasha garaafka sidoo kale waxay ku sugan yihiin adduunka khiyaaliga ah. Naqshadeynta muuqaalka guud ahaan wuxuu doonayaa inuu abuuro xayeysiis hal abuur leh oo ku dhiirrigeliya dadweynaha inay u dhowaadaan nooc gaar ah, laakiin marar badan xayeysiisyadan waa inay ku jiraan mala-awaal, sida jilayaasha kombuyuutarka ku shaqeeya.
Xaqiiqdii, waxaa loo tixgeliyaa in naqshadeynta garaafka gudaheeda, had iyo jeer ay jirto khiyaali, kaliya in nashqadaha loo soo bandhigi karo heer ka weyn ama ka yar. Xitaa naqshadeeyayaasha garaafka abuuri karaa naqshado leh walxo dhab ah kuwaas oo abuura dareenka khayaaliga ah qofkii arka. Marka naqshadeeye garaafku uu gebi ahaanba ku lug leeyahay khiyaali, oo mala awaalkiisu si xad dhaaf ah u buuxo, markaa wuxuu bilaabaa inuu kaqeybqaato filimada animated.
Mid ka mid ah filimadaas, oo aad ku arki karto qashinka hal-abuurnimada naqshadeeye muuqaal, ayaa ku jira Bahal ayaa ii imanaya inuu i arko.
Filimku wuxuu ka kooban yahay naqshadeeye garaaf ah iyo inkasta oo animators ayaa la rumeysan yahay inay yihiin kuwa jilaya jilaagan, xaqiiqadu waxay tahay inay kaliya u horseedayaan shaashadda una wareegaan naqshadaha uu sameeyay naqshadeeyaha garaafku.
Filimka "Bahal baa ii imanaya" wuxuu lahaa kaqeybgal aad ufiican qaabeynta garaafka xitaa wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Goya taas. Saamaynta gaarka ah, si kastaba ha noqotee, waxay leedahay wax badan oo la sameeyo dhammaantood farsamooyinka maqalka taas oo wax ka beddeleysa aragtida adduunka aan ku nool nahay iyo in kasta oo xaqiiqda ay jirto in ka-qaybgalku aad uga yar yahay naqshadeeyayaasha, haddana weli waa suuragal in la arko sida abuurista walxaha kala duwan loogu daro saameyntaas.
Haddii aad u maleyneysay in kaliya animators ay tahay inay la yeeshaan saameyn gaar ah iyo astaamo fantastik ah, waad qaldan tahay. Xaqiiqdii, naqshadeynta qaabdhismeedka ayaa aad muhiim u ah oo xitaa la dhaho lSaamaynta gaarka ah iyo animation-ku waxay ku saleysan yihiin. Tani waa sababta oo ah in kasta oo ay xaqiiqda tahay in naqshadeynta garaafku aysan inta badan lahayn qalab ay ku falgaliso dhammaan waxyaabaha cajiibka ah iyo jilayaasha, waa midka keliya ee awood u leh inuu ogaado nooca abuurka la sameynayo si loo kiciyo dareennada iyo fikradaha kala duwan ee ugu dhow sheekada la sheegayo.
Naqshadeynta iyo farsamada
Naqshad sameynta iyo farsamada, dadka hada waxay awoodaan inay isku dhex ridaan xaqiiqda iyo male-awaalka ama in la beddelo xaqiiqda oo la abuuro wax si fudud la yaab leh. Asal ahaan, haddii aan la helin naqshadeynta garaafka, suurtagal ma noqon laheyd in la sameeyo waxyaabo cajiib ah, iyo naqshadaha kiciya shucuurta bulshada dhexdeeda ee ku raaxeysanaya teknoolojiyad la'aana suuragal ma ahan in qaababkan loo keeno xaqiiqda.
Naqshadeynta garaafka waa inuu sameeyaa daraasad dhammaystiran xitaa dhinacyo badan oo nolosha ah, maadaama khayaali ku saleysan tahay wax run ah. Tusaale ahaan, in la abuuro xayawaanka ku jira filimka “Buugga hawdka”, Dhawaan ayaa laga sii daayay tiyaatarada, waxay ahayd lagama maarmaan in nashqadeeyayaashu ay bartaan xayawaanka guud ahaan ku nool hawdka, iyagoo ku daray taabashada khiyaaliga ah ee suurta gelisay sheekadan caruurta ee cajiibka ah.
Sidoo kale, naqshadayaasha "Jurassic World" waxay ahayd inay sameeyaan baaritaan ku saabsan dinosaurrada kala duwan iyagoo adeegsanaya dukumiintiyo qadiimi ah iyo dib u dhiska lafaha, si ay ugu dhawaadaan sida ugu macquulsan ee dhabta ah.
Qaar ka mid ah dinosaurs-ka filimka ayaa hiddo ahaan loogu sameeyay shaybaarada Beerta Jurassic, sidaas darteed waxay ahayd inay ku daraan sifooyinka xayawaanka kale kuwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Naqshadeynta sawirada ayaa mas'uul ka ah walxaha cajiibka ah ee filimada
Naqshadayaasha naqshadeynta waxay badhkood u dhexeeyaan farshaxan iyo agaasime farshaxan. Waxaan ka ognahay in badan oo ku saabsan bilicsanaanta taas oo inta badan loola jeedo farshaxanka wanaagsan (cilmu-nafsiga midabka, qaab qorista, sawirrada, iwm. Laakiin waxaan ka ognahay wax ku filan oo ku saabsan suuqgeynta (abuurista xayeysiinta, calaamadeynta, iwm.) Mashruucyadan inay noqdaan kuwo khuseeya.
Ma ahan wax qarsoodi ah in tobanka ugu sarreeya ee naqshadeeyayaasha muuqaalka filimku ku saleysan yihiin ay ku yaalliin Hollywood-ka oo qayb ahaanna ay u adeegaan sidii qandaraaslayaal-hoosaadyo ku jira shaashadda filimkan adduunka.